रौतहटमा लुटियो मतपेटिका, बाकस बोकेर खेतैखेत भागे स्थानीय
रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका वडा नं २ भिडियाहीमा मतपेटिका लुटिएको छ ।
सिल गरिसकिएको मतपेटिका स्थानीयले लिएर भागेको उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रसाद मुखियाले जानकारी दिएका छन् ।
मतपेटिका बोकेर स्थानीय खेतैखेत भागेका थिए ।
यस सम्बन्धमा प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइसकिएको अध्यक्ष मुखियाले लोकान्तरसँग बताए ।
तस्वीर : स्थानीय पत्रकार अभिमन्यु पटेलको फेसबूक वालबाट
काठमाडौं महानगर : स्थापितभन्दा ३९८४ मतले बालेन अगाडि, कसको कति मत ?
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले मतान्तर फराकिलो बनाउँदै लगेका छन् । पछिल्लो मतपरिणामअनुसार बालेनले ८ हजार ४२० मत पाएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमाले...
एमालेलाई हराउँदै खाँडाचक्र नगरप्रमुख बने स्वतन्त्र उम्मेदवार शाही
कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाको अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार कमलबहादुर शाही निर्वाचित भएका छन् । २ हजार ९१९ मतसहित शाही निर्वाचित भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका जसीप्रसाद प...
विराटनगरको १८ हजार ६१८ मत गणना : कोइरालाको अग्रता कायमै, कसको कति मत ?
विराटनगर महानगरपालिकामा जारी मतगणनामा नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइरालाले अग्रता कायम राखेका छन् । १८ हजार ६१८ मत गणना गर्दा विराटनगर महानगरमा कोइरालाले ५ हजार ९०८ मत ल्याएका छन् । उनका निकटतम ...
अछामको चौरपाटीमा कांग्रेसका साउद निर्वाचित, उपाध्यक्षमा खड्का
अछामको चौरपाटी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका भीम साउद विजयी भएका छन् । साउद ३ हजार ९८२ मतसहित गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका रामबहादु...
तीव्र प्रतिष्पर्धाबीच काठमाडौंको टोखा नगरपालिकामा रजनी थापाको अग्रता